overhead စျေးပေါတဲ့ Glass ကိုကားဂိုဒေါင်တံခါးများ China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:Glass ကိုကားဂိုဒေါင်တံခါးများ,စျေးပေါဂိုဒေါင်တံခါးများ,overhead ဂိုဒေါင်တံခါးများ
Home > ထုတ်ကုန်များ > overhead အပိုင်းတံခါး > စက်မှုဇုန်အပိုင်းတံခါး > overhead စျေးပေါတဲ့ Glass ကိုကားဂိုဒေါင်တံခါးများ
လက်မှတ်: CE ISO9001 SGS TUV
ပွင့်လင်း Vision ၏ Window: အရည်အသွေးမြင့် polycarbonate နဲ့ဖန်ပြား ပြင်ပမှာသူ့ရဲ့အတွင်းပိုင်းနှင့် visble အဆိုပါတန်းအသွင်အပြင်ထုတ်ဖေါ်ရှင်းလင်းစွာဖြစ်ပါသည်, ကောင်းသောင့်လင်းမြင်သာခြင်းနှင့်အလင်းရောင် eftects စောင့်ရှောက်လော့။ တင့်တယ်ခြင်းနှင့်တာရှည်ခံ: အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်း လုပ်. ပီပီဖြစ်ယူကြနှင့်။
window stryle နှင့် panle စတိုင်
တံခါးကိုအထုပ်: အထပ်သားအမှု (စသည်တို့ကို Seafreight & airfreight များအတွက်သင့်တော်)
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်. စုံစမ်းရေးပေးပို့မှကြိုဆိုပါ၏!
လူမီနီယံအပိုင်းတံခါးကိုဖွင့်ရုပ်သိမ်းဂိုဒေါင် overhead အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
overhead ကားဂိုဒေါင်မြန်နှုန်းမြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းပုဒ်မတံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တံခါးကိုတက်ရုပ်သိမ်း overhead အမြန်အရေးယူစက်မှုလုပ်ငန်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Glass ကိုကားဂိုဒေါင်တံခါးများ စျေးပေါဂိုဒေါင်တံခါးများ overhead ဂိုဒေါင်တံခါးများ overhead အပိုင်းဂိုဒေါင်တံခါးများ Up ကိုနှင့်ဂိုဒေါင်တံခါးကျော် Rolling Panel ကိုကားဂိုဒေါင်တံခါး ရောင်းရန်ကားဂိုဒေါင်တံခါးများ စမတ်ကားဂိုဒေါင်တံခါး